Ukutya kwePerricone ukunciphisa umzimba njenge-FAMOUS | Ukutya kukaNutri
La Ukutya kwePerricone yenye yeendlela ezithandwayo zokulahleka kobunzima phaya phaya kwaye unetyala layo kwi ugqirha wesikhumba odumileyo kunye nengcali yesondlo enegama elifanayo. Ukutya okutshilo, ukongeza ekuthembekeni kokulahleka kwesisindo ngexesha elifutshane, kuqinisekisa ukuba kuyanceda ukuphucula imeko yengqondo kunye nokunyusa inqanaba lamandla kulowo kuthethwa ngaye. Kukutya okwaziwayo namhlanje ukusukela oko abaninzi abadumileyo baye bamlandela ukuba anciphise umzimba kunye nokufezekisa inani elincinci.
Oku kutya kuzama ukulandela uhlobo lokutya kunye izondlo ezininzi kangangoko kunokwenzeka kwaye uphephe indlela yokunciphisa izinto ekuthiwa kukutya okungummangaliso ngamaxesha onke. Nangona kunjalo kunjalo ukutya okugxekwa kakhulu kunye nokudimazeka linani elikhulu leengcali kunye neengcali zesondlo ezikubona njengokutya okungummangaliso ngakumbi okunesiphumo esiyingozi sokuphindaphinda.
1 Yintoni ukutya kwePerricone?
2 Amaqela okutya alishumi esondlo sePerricone
3 Ukutya kwePerricone imenyu yemihla ngemihla
4 Ukungancedi kokutya kwePerricone
Yintoni ukutya kwePerricone?
UGqr. Perricone uthi zikhona amaqela okutya alishumi ngeentlobo ezahlukeneyo zezondlo ezingafanelekanga ukusilela kukutya kwemihla ngemihla kwakhe nabani na ofuna ukuphulukana nesixa esikhulu seekilos. Ukuthintela ukufumana ubunzima kunye neekhilogram, ukutya kuyacebisa ukunqanda kangangoko kunokwenzeka ukusetyenziswa kweswekile kwaye ubeke endaweni yazo ezinye iimveliso ezisempilweni ezinje ngobusi okanye i-stevia.
Ukwacebisa ukunqanda ukutya ingqolowa okanye umgubo wengqolowa kuba zingenazakhamzimba kwaye zinjalo iikhalori ezininzi yomzimba. Ezinye iimveliso ezingavumelekanga kolu hlobo lokutya zezi amafutha e-hydrogenated njengokuba kunjalo imajarini okanye ibhotolo.
Amaqela okutya alishumi esondlo sePerricone
Los amaqela okutya alishumi Ukukhuselwa kukutya kwePerricone zezi zilandelayo:
Los I-Omega-3 fatty acids Iluncedo kakhulu emzimbeni njengoko ibonelela ngamafutha asempilweni. Zifumaneka ekutyeni okunje nge salmon, ityhuna, isardadi, okanye amaqanda.
Iziqhamo ezi ityebile kwifayibha kwaye zinceda ukwanelisa iphango njengoko kunjalo ngeeapile kunye neziqhamo ze grapefru.
Iziqhamo ezinamafutha aphezulu njengeavokhado. La mafutha asempilweni emzimbeni kwaye ayanceda lawula i-cholesterol yegazi.
Izinongo ezifana nesinamoni, i-nutmeg, okanye i-turmeric. KwiPerricone, iziqholo zibalulekile ekutyeni njengoko zinceda ukugcina indawo amanqanaba eswekile egazini kwaye zizezona zinto zibalaseleyo endaweni yetyuwa.
Isilili sine Amandla amakhulu okulwa nokudumba kwaye inceda ukukhawulezisa imetabolism ekuvumela ukuba ususe iikhalori ngendlela ekhawulezayo.
Amantongomane anje ngee walnuts, iiamangile okanye iimbewu zethanga. Batyebile ii-omega ezi-3 ezinempilo kwaye ziqulathe isixa esikhulu seprotein.
Iimbotyi ezinjengeembotyi okanye iilentile zityebile ngefayibha kwaye ziyanceda tshisa amanqatha ngokukhawuleza nangokufanelekileyo kunezinye iintlobo zokutya.
Yogurt njengoko injalo ukutya kweprobiotic Inceda ekuphuculeni iintyatyambo zamathumbu kwaye ikwacebile ngecalcium.
Iicereals Njenge-oats okanye irhasi zinesondlo ngokwenene kwaye ziqulathe ifayibha eninzi.
Imifuno enje nge-broccoli, isipinatshi, okanye iletisi. Oku kutya Iikhalori ezisezantsi kwaye ucebile kakhulu kwiivithamini kunye nefayibha.
Ukutya kwePerricone imenyu yemihla ngemihla
Ukutya kucebisa ukusela Iiglasi ezi-2 zamanzi kamsinya nje xa uvuka, kuba le ndlela ityhefu enokuba isemzimbeni iyasuswa.
Isidlo sakusasa: Inokuba iquka itortilla enye icacile dibanisa isiqwenga sesiqhamo kunye nekomityi ye-oatmeal enobisi olukhrim okanye iyogathi. Awunakuba nesonka okanye ikofu okanye ijusi.
Isidlo sasemini: Unako ukufumana okuncinci Isalmon eyosiweyo Kunye nesaladi eluhlaza enxibe ioyile yomnquma kunye nesiqwenga sesiqhamo. Kubalulekile ukuba usele iiglasi ezi-2 zamanzi ngelixa usitya.
I-snack: Ngexesha lokutya kuyacetyiswa ukuba uthathe iyogathi yendalo ecaleni kwesiqwengana sesiqhamo kunye neglasi yamanzi.
Ukutya isidlo sangokuhlwa: Kuvunyelwe ukuba itye ityhuna eyosiweyo kunye nesaladi eluhlaza enxibe ioyile yomnquma kunye nesiqwenga sesiqhamo. Ukusela Iiglasi ezi-2 zamanzi ngelixa udla.
Kuvumelekile ukutya phakathi kwentsasa intwana yamandongomane okanye ezinye iziqhamo ukwanelisa indlala kwaye ungafiki ulambe kakhulu ngexesha lesidlo, ngelixa kubalulekile ukusela malunga neelitha ezimbini zamanzi ngosuku ukugcina umzimba ucocekile ngokugqibeleleyo.
Ukungancedi kokutya kwePerricone
Njengayo nayiphi na into ekuthiwa kukutya okungummangaliso, inikeza iziphumo ezifanelekileyo ngexeshana elifutshane. Ngokukodwa, ukutya kwePerricone kuqinisekisa ukuphulukana ezimbalwa Iikhilogram ezi-8 ngenyanga enye nje. Le nyaniso ibangela ukuba kwimeko apho kungabikho lutshintsho kwindlela otya ngayo, ekugqibeleni ubuyise bonke ubunzima obulahlekileyo ngenxa yokoyikwa isiphumo esiphakamileyo. Ngaphandle kwamathandabuzo eyona ngozi inkulu kolu hlobo lokutya, ke kubalulekile ukuba utshintshe imikhwa wakugqiba ukutya kwaye ukhethe ukutya okunempilo nokulinganayo ukukunceda ugcine ubunzima obufanelekileyo kunye nokuziqhelanisa nokuzilolonga rhoqo. .
Enye into ebuyayo kukuba kunjalo ukutya okungalinganiyo kwaye ayinikezeli zonke izondlo eziyimfuneko emzimbeni. Kungenxa yoko le nto kuyingozi ukukwandisa oku kutya ngokuhamba kwexesha kuba umzimba ungasokola iingxaki zempilo ezinzulu.
Ngaphandle kokungalunganga nokungalunganga, ukutya kwePerricone yenye yeendlela ezithandwayo zokulahleka kwesisindo emhlabeni kwaye zininzi abadumileyo abaye baxhasa olu hlobo lokutya. Phakathi kwabo, okhuselayo onqabileyo ubenguKumkanikazi waseSpain kwaye yile nto UNkosikazi Letizia Sele iyeyona ntengiso ibalaseleyo kolu hlobo lokutya.
Ukuba uthathe isigqibo sokuqalisa olu hlobo lokutya ukuze ulahlekelwe ziikhilogs ezimbalwa ezongezelelweyo, naka ingqalelo kwividiyo elandelayo kuba iyakukunceda ukwazi okungakumbi malunga nokutya okudumileyo kwePerricone.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukutya kukaNutri » Isibonelelo sokutya » Ukutya kwePerricone
Izinto ezisisiseko zokuzifudumeza, iingcebiso ezifanelekileyo
Ukutya amaqhinga okunciphisa iziNto eziDala kubantu abaneArthritis